रोचक खबर – Page2– rastriyakhabar.com
१५०० उडिरहेका चराहरु एक्कासी भुईमा खस्दै मृत्यु हुँदै गरेका दृष्यको वास्तविकताले झस्कायो
काठमाडौ । आकाशमा उडिरहेका चराहरु अचानक भकाभक जमिनमा खसेको दृष्य वास्तवमै अनौठो थियो । जमिनमा खसेर संसार छोड्दै गरेका चराहरुको संख्या पनि उदेकलाग्दो थियो । उडिरहेका चराहरु एक्कासी भुईमा खस्दै मृत्यु भइरहेका दृश्य देखेका मानिसहरुले त्यो भिडियो र तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन् । त्यस्ता..
काठमाडौं । पृथ्वीमा पटक–पटक भूकम्प गइरहेको हुन्छ । भूकम्पसहितका विपत्तिसँग डराएर मान्छेहरु अर्को ग्रहमा जान खोज्दैछन् । यो बीचमा अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासा (नासा) को ल्यान्डर मार्स इन्साइट मंगल ग्रहमा पुगेको छ । उक्त ल्यान्डरले दुई भूकम्पको धक्का महसुस गरेको खुल्न आएको छ । यसभन्दा पहिले दुई..
मङ्लबार, चैत्र ३१, २०७७ मा प्रकाशित
शुक्रबार, चैत्र २७, २०७७ मा प्रकाशित
एजेन्सी । अष्ट्रेलियाका दुई जुम्ल्याहा दिदीबहिनी एना र लुसी हरेक क्रियाकलाप एकैसाथ गर्ने गर्दछन् । उनीहरु बीच दुई ज्यान एक प्राण भने झैं दुबै जे काम पनि सँगै गर्न रुचाउँदछन् । यहाँसम्म कि उनीहरुका ब्वाइफ्रेण्ड पनि एकै छन् । यी दुबै दिदीबहिनी केही समय पहिले टीएलसी एक्स्ट्रीम सिस्टम नामको शोमा पनि..
काठमाडौं। सामान्य रुपमा हेर्दा स्त्री कण्डमलाई सुखभोग गर्नुभन्दा केहि समय अगाडि लगाउनु पर्दछ । तर तल्काल प्रयोग गरेर सुखभोग गर्न मिल्दैन । क’ण्डममा भएका दुई वटा रि’ङ्गहरुमध्ये खु’म्चिने पट्टिको रिङ्गलाई यो’नी भित्र घु’साउनु पर्दछ । अर्को कुरा मिति र प्याकेटमा हावा भए नभएको राम्ररी हेर्नु पर्दछ ।..
काठमाडौं । कल्पना गर्नुहोस्, तपाईंले खाजा मगाउनुभयो तर खाजा गलत आयो । गलत भन्नुको मतलब मम मगाउँदा चाउमिन आएको भने होईन नि । सामान्य गल्ती जस्तै तपाईंले शाहकारी खाजा मगाउनुभयो तर झुक्केर अर्कै पर्न गयो । तब तपाईं के गर्नुहुन्छ ? पहिलो त उक्त खाजा फिर्ता पठाउनुहुन्छ र पैसा पनि माग्नुहुन्छ । अर्को फेरि..
पौने ६ करोडको औँठीसहित प्रेम प्रस्ताव, तर युवतीले गरिन् अस्वीकार
आइतवार, फाल्गुन १६, २०७७ मा प्रकाशित
आफूले मन पराएको मानिसलाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने तरिका अनेक हुन सक्दछन् । महँगा गिफ्टसहित सरप्राइज दिन चाहन्छन् युवा युवतीहरु । तर कहिलेकाहीँ जतिधेरै महँगो गिफ्टसहित प्रपोज गर्दासमेत प्रेम प्रस्ताव अस्वीकृत हुन सक्दछ । एकजना युवकले झण्डै पौने ६ करोड रुपैयाँ पर्ने औठीँसहित आफूले मन पराएकी..
यी अबेम्बर लुक मोडल जसको शरीरमा ९८ प्रतिशत ट्याटु छ (फोटोफिचर)
एजेन्सी । अबेम्बर लुकले अन्तत फेरि ट्याटु बनाएकी छिन् । यी मोडलको शरीरको ९८ प्रतिशत भागमा ट्याटू थियो । त्यसैेले उनले नयाँ ट्याटुका लागि टाउकोको केही भाग खौरिइन् । इन्स्टाग्राममा उनले सर्पको डिजाइनमा कोरिएको नयाँ ट्याटु प्रदर्शन गरेकी छिन्, यो ट्याटु उनको देब्रे कानमाथिबाट खोपिएको छ । यी मोडल..
काठमाडौं । क्यानाडामा बस्ने रोरी भ्यान केवल ७ बर्षकी भइन् । सामान्य बालिकाजस्तो देखिएकी छिन् । खानपान पनि सामान्य रहेको छ । तर कडा परिश्रम र प्रशिक्षणको माध्यमबाट, उनले आफूलाई विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली बालिकाको रुपमा रूपान्तरण गरेकी छिन् । हालसालै उनी संयुक्त राज्य अमेरिकामा अण्डर ११ र अण्डर १३..
काठमाडौं । विद्यालय कुनै पनि विद्यार्थीका लागि उसको दोस्रो घर हो । विद्यार्थीहरुले आफ्नो अधिक समय विद्यालयमा बिताउँछन् । तर कहिलेकाँही त्यस्ता केही घटनाहरु बाहिर आउँछन्, जसलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै एक घटना बेलायतबाट बाहिर आएको छ । त्यहाँको बकिङ्घमशायरमा एक ३५ वर्षीया महिला..
केही बर्षयता बलात्कारका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । यौनका बिषयमा मानिसमा रहेको विकृत मानसिकताका कारण बलात्कारका घटना हुने गरेका छन् । तर सदियौंपूर्व यौनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन लेखिएको पुस्तक थियो, कामसूत्र । कामसुत्रमा यौनका बिषयमा खुलेर चर्चा गरीएको थियो । कामसूत्र भनेको केवल यौनक्रियाकलाप..
लोकप्रिय हुँदैछ यौन सम्बन्धको यो नयाँ तरिका ‘करिज्जा’
यौन सम्बन्ध र सो को विभिन्न मुद्रा (आशन) को बारेमा लगभग हामी सबै जोडीले जान्दछौँ । तर, बितेका केही वर्षमा सेक्सको एक नयाँ तरिकाले स्थान जमाएको छ । सेक्स थेरापिष्टको बीचमा यो नयाँ सेक्स पोजिशनको अधिक नै चर्चा भएको पाइन्छ । यसको नाम हो ‘करिज्जा’ । जसको बारेमा अधिक चर्चा र जीवनलाई थप रोमाञ्चक बनाउन मद्यत..
मङ्लबार, माघ १३, २०७७ मा प्रकाशित
पेरिस, एएफपी । यस शताब्दीको पहिलो २० वर्षको अवधिमा विषम् मौसमी घटना जोडिएका प्राकृतिक प्रकोपबाट झण्डै चार लाख ८० हजार व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । हालै सार्वजनिक एक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनले मानवको अस्तित्वमा नै खतरा उत्पन्न गराइरहेको औँल्याएको छ । खासगरी विकासशील मुलुकहरुले सामना..
महाभारत हिन्दू धर्म संस्कृतिको महत्वपूर्ण ग्रन्थ हो । महाभारतमा कयौं यस्ता पात्रहरु छन् जसको भूमिका निकै महत्वपूर्ण थिए । जो आन्तरिक समस्यासँग पनि जुधिरहेका थिए । महाभारतका केही महत्त्वपूर्ण पात्रहरुका बारेमा हामी यहाँ उल्लेख गर्न गइरहेका छौं । १. शकुनी महाभारतका एक महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्..